Diego Godín oo u sharaxay saaxiibkiis Antoine Griezmann inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or – Gool FM
Diego Godín oo u sharaxay saaxiibkiis Antoine Griezmann inuu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or
(Atletico) 28 Sab 2018. Kabtanka kooxda Atletico Madrid ee Diego Godín ayaa tilmaamay in qalbigiisa uu xiiseenayo in saaxiibkiis Antoine Griezmann uu ku guuleysan doono abaal marinta Ballon d’Or ay si gaar ah u bixiso majalada France Footbal.
Hadalka kasoo yeeray Diego Godín ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka Madrid Derby ay Sabtida ku booqan doonaan Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu.
“Ma arko wax intaas kasii badan uu sameyn karo Antoine Griezmann si uu ugu guuleysto abaal marinta Ballon d’Or, sababtoo ah wuxuu ku guuleestay UEFA Europa League, koobka aduunka 2018, iyo UEFA Super Cup”.
Intaas waxaa sii dheer, Diego Godín ayaa sheegay in Antoine Griezmann uu u qalmay inuu ku soo baxo liiska kama dambeysta ahaa ee abaal marinta xidiga ugu fiican aduunka 2018, taasoo uu dhawaan ku guuleestay Luka Modrić
Si kastaba guuleystaha abaal marinta Ballon d’Or 2018 ayaa waxaa lagu dhawaaqi doonaa 3-da December, kahor inta aanan liiska musharaxiinta abaal marintan la shaacinin 8-ka October.
Jorginho oo ka warbixiyay sirta ka dambeysa inuu iska diido ku biirista kooxda Manchester City